Ukufunda: Imboni Yezokudla Iyibona Kanjani Isayensi, Izinhlaka Zomphakathi Nezinhlangano Zezokwelapha - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Ukutadisha: Imboni Yezokudla Iyibona Kanjani Isayensi, Izinhlaka Zomphakathi Nezinhlangano Zezokwelapha
Posted on September 13, 2017 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesithathu, Septhemba 13, 2017
Ukuze uthole olunye ulwazi lokuxhumana: UGary Ruskin: + 1 (415) 944 7350 noma UGary Sacks: + 61 403 491 205
Yini abaholi bemboni yokudla abacabanga ngayo ngempela ngesayensi, ezempilo yomphakathi kanye nezinhlangano zezokwelapha?
Okusha cwaningo kumagazini i-Critical Public Health, osuselwa embhalweni obhalwe ngumholi omkhulu we-Coca-Cola nomholi wemboni yezokudla, ubeka okubonakala kuyindlela yomkhakha wezokudla ekubhekaneni nezinselelo zomhlaba jikelele zesayensi, zokulawula nezempilo yomphakathi kanye nobudlelwano bomphakathi. I- Umbhalo itholwe nge-state FOIA yi-US Right to Know, iqembu elibheka imboni yezokudla.
Lo mbhalo uchaza ukuthi abaholi bemboni yezokudla “kumele basebenzise kanjani izinhlangano zangaphandle” lapho bebhekene nezingxabano mayelana nobungozi bezempilo kwimikhiqizo yabo.
"Lo mbhalo ushaya phansi ngonyawo ngoba ukhombisa ukuthi imboni yezokudla icabanga kanjani ngemiphakathi yezempilo kanye nezempilo yomphakathi njengabasebenzi," kusho uGary Ruskin, umqondisi-ndawonye we-US Right to Know. "Kubalulekile ukuthi ochwepheshe bezempilo nabomphakathi bazi ukuthi imboni yezokudla ibaphatha kanjani - njengezinsimbi ezizosetshenziswa ngendlela epholile - ukuze bangaweli ezingibeni zemboni."
Lolu cwaningo luthi: “Leli phepha linikeza ubufakazi obuqondile bokuthi abaholi abaphezulu embonini yezokudla bayayisekela indlela ngamabomu futhi ehlelekile yokuthonya ubufakazi besayensi nemibono yochwepheshe. Okubalulekile, imboni yezokudla ifuna ukukwenza lokhu ngokuhlanganisa oxhumana nabo ezifundweni, ngokungena ezinhlanganweni ezinkulu zesayensi nezinhlangano zezokwelapha, nangokuba nomthelela ekwakhiweni kobufakazi besayensi. ”
Ucwaningo, olunesihloko esithi “Izinkampani Zokudla Zibuthonya Kanjani Ubufakazi Nemibono - Kususelwa Emlonyeni Wehhashi, ”Kuhlaziya i-imeyili ebhalwe nguMichael Ernest Knowles, owayeyiphini likamongameli wezindaba zesayensi nezomthetho zomhlaba wonke eCoca-Cola, nowayengumongameli we-International Life Sciences Institute (ILSI), iqembu eliphambili lezimboni zokudla. Le imeyili yathunyelwa ku-Alex Malaspina, owayeyiphini likamongameli omkhulu weCoca-Cola, nowayengumongameli nomsunguli we-ILSI.
Izindatshana zezindaba, ama-fact sheet nokuhlaziywa nge-ILSI kuyatholakala ku: https://usrtk.org/our-investigations/.
Ucwaningo lubhalwe ngokubambisana nguGary Sacks waseDeakin University, uBoyd Swinburne wase-University of Auckland, u-Adrian Cameron waseDeakin University, noGary Ruskin wase-US Right to Know.
I-US Right to Know iyinhlangano engenzi nzuzo ephenya ubungozi obuhambisana nohlelo lokudla oluyinkampani, kanye nezinkambiso nomthelela wemboni yezokudla kwinqubomgomo yomphakathi. Ngemininingwane engaphezulu, bheka usrtk.org.
Umsebenzi Wezemfundo, Ukukhishwa Kwezindaba, Uphenyo lwethu